သစ်တောကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းက ပြည်သူတို့ရပိုင်ခွင့်ကို မျက်ကွယ်ပြုဟု ကရင်အဖွဲ့ဆို
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဖုံးလွှမ်းနေသော ကျယ်ပြောလှသည့် သစ်တောဧရိယာသည် သစ်တောထိန်းသိမ်းလိုသူများနှင့် သစ်တောကို အိမ်ရာသဖွယ် နေထိုင်လာခဲ့သူတို့အကြား သဘောကွဲလွဲမှု၏ ဆုံမှတ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အနန ္တအမည်ဖြင့် 4G+ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ရန်ကုန်၌ စတင်
ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ သုံးစွဲနိုင်မည်ဟူသည့် 4G+ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ananda (အနန္တ) အမည်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ananda 4G+ အသုံးပြုသူများသည် တစ်လလျှင် ကျပ် ၃၅,၀၀၀ ဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိသည့် ဒေတာများကို အမြန်ဆန်ဆုံး အင်တာနက်မြန်နှုန်းဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည်ဟု ၎င်းက ယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ “ကျွန်မတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကို စစ်မှန်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် လူနေမှုဘဝပုံစံကို ပေးစွမ်း သွားဖို့ပါ။ ananda (အနန္တ) ဆိုတဲ့.
Pernod Ricard က မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝီစကီများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ဝိုင်နှင့် ယမကာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Pernod Ricard က ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝီစကီများ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကြေညာလိုက်သည်။ နာမည်ကြီးသည့် Chivas၊ Ballantine’s နှင့် Seagram’s ဝီစကီတံဆိပ်များ ထုတ်လုပ်နေသည့် Pernod Ricard နှင့်.
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသည့် ဆုပေးအပ်ခံရ
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အခမ်းအနားတွင် PEN America 2018 Barbey Freedom to Write Award ဆုကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး စာပေနယ်မှ အထင်ရှားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကလည်း ၎င်းတို့အား ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်
Episode 30: မြောက်ဦး ပဋ္ဋိပက္ခနောက်ဝယ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလလယ်လောက်တုန်းက မြောက်ဦးမြို့မှာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူအုပ်ထဲကို ရဲက ပစ်ခတ်လို့ လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး အများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတကာရပ်ဘီပြိုင်ပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် လက်ခံကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သီးခြားရပ်တည်နေသည့် ပထမဆုံးရပ်ဘီကလပ်ဖြစ်သော Yangon Dragons က ယခု ရက်သတ္တပတ်အကုန်တွင် Indochine Cup 2018 ရပ်ဘီပြိုင်ပွဲကို လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အရှိန်အဝါကြီးမားသည့် အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကျင်းပခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ချေးငွေ သတင်းအချက်အလက်ဌာနအတွက် အချက်အလက် ရယူစုဆောင်းရေး စိန်ခေါ်မှုများ ကြုံနိုင်
ကျော်လင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ချေးငွေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဌာန (Credit Bureau) အား ဗဟိုဘဏ်မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Credit Bureau ပေါ်ပေါက်ရန် ကာလကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည့်နည်းတူ ချေးငွေများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်လှမ်းမီနိုင်စေပြီး အားလုံးပါဝင်သော ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ၌ ဖြစ်ရေးအတွက်.
ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်သစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်လ လာရောက်မည်
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံတမန်သစ်သည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် အကြပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်လအတွင်း လာရောက်မည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားသည်။
ဟိန္ဒူများကို အာဆာက အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ပြောကြား